Umshini Wokunyathelisa Wezitolo Zama wholesale Diy Logo China Manufacturer
Incazelo:Umshini wokunyathelisa we-Textile Ink,Umshini Wokunyathelisa Umshini Diy Logo,I-Dtg yeThembethe yeThembethe ye-Wholesale
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-Digital > Iphrinti yeThetile > Umshini Wokunyathelisa Wezitolo Zama wholesale Diy Logo
I Textile Ukuphrinta Machine Ink iza CMYKW, ungasebenzisa le iphrinta ukuphrinta yonke imikhiqizo yendwangu. Kungaphrinta izithombe eziphezulu ezichaza izinto ezinhlobonhlobo, ezifana ne-t- shirt, amabhulukwe, izicathulo, izingubo, isicathulo, isilikhi, isikhwama sokuthenga, ama-hoodies njalonjalo. Umshini Wokunyathelisa I-Textile Diy Ilogo, sisebenzisa inkinobho yekhwalithi ephakeme futhi umphumela wokuphrinta uphelele. Sinebuchwepheshe obusha ne-infrared ray ukulawula ubude bokuphrinta. T he izithombe umbala, futhi kukhona manzi, elangeni, ukugqoka ukumelana naso futhi kwenze awusoze wabuna.
Ukusetshenziswa kwe- Wholesale Dtg Textile Printer :
Iphrinti yeThem yeThi edayiswayo
Umshini wokunyathelisa we-Textile Ink Umshini Wokunyathelisa Umshini Diy Logo I-Dtg yeThembethe yeThembethe ye-Wholesale Umshini wokunyathelisa we-Textile weMbala Umshini wokunyathelisa we-Textile we-Textile Mini Umshini wokunyathelisa we-Digital Umshini wokunyathelisa we-Digital UV Umshini wokunyathelisa we-Foam